जब मन डराउँछ « Nepal Health News नेपालको नं.१ जनस्वास्थ्य पत्रिका
जब मन डराउँछ
२०७४, २३ जेष्ठ मंगलवार ११:२२ मा प्रकाशित
प्रा.डा.सरोज प्रसाद वझा त्रि.वि. शिक्षण अस्पतालमा मनोरोग विभागका प्रमुख, मनोरोग चिकित्सक संघको पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँ नेपालबाट साइक्याट्रिकमा एमडी गर्ने पहिलो डाक्टर हुनुहुन्छ । त्रि.बि.शिक्षण अस्पतालबाट मनोरोग विषयमा विशेषज्ञता अध्ययन शुरु हुँदा डा. वझा एक्लै हुनुहुन्थ्यो । यसअघि मनोरोगमा एमडी गर्न विदेश जानुपर्दथ्यो । प्रा.डा.वझाले अहिले इन्स्टिच्यूट अफ मेडिसिनको एमबीबीएस डाक्टरहरुको पाठ्यक्रममा मानसिक स्वास्थ्यलाई छुट्टै विषय बनाई मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धि तालिम र अध्यापन गराउने अभियान शुरु गर्नुभएको छ । स्थानीय जिल्ला अस्पताल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा शारीरिक स्वास्थ्य सेवाका साथै मानसिक स्वास्थ्य सेवा पनि उपलब्ध गराउने उहाँको लक्ष्य छ । सो भएको खण्डमा नेपाली जनताले आफ्नै घरदैलोमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गरी लाभान्वित हुनसक्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट स्थानीयबासीहरुले कम कडा खालका मानसिक रोगको उपचार पाउने प्रा.डा वझाको भनाइ छ । अहिले मानसिक रोगको उपचारका लागि राजधानी वा भारत जानुपर्ने बाद्यता छ । यस शीर्षकमा हामीले प्रा.डा वझालाई पत्रिकाको कभर पेजमा राखेका छौं । साथमा मानसिक स्वास्थ्य र डिप्रेसनबारे जानकारीमूलक महत्वपूर्ण आलेख पनि प्रस्तुत गरेका छौं ।
उनमा खुशीको वातावरण छैन । काम गर्न जाँगर आउँदैन । रमाइलो गर्न मन लाग्दैन । मनमा नराकात्मक सोच आइरहन्छ । जीवनदेखि विरक्त लाग्छ । बाँच्नुको अर्थ देख्दैनन् । मृत्यू नै सबै कुराको समाधान महसुस गर्छन् । यो बाजुरा जुकोटका ३७ बर्षीय हरिबहादुर शाही (नाम परिवर्तन) को व्यथा हो । उनका एक श्रीमती, २ छोरा र एक छोरी छन् । पेशाले उनी शिक्षक हुन् । उनलाई मानिससँग बोल्न डर लाग्छ । उनमा यस किसिमको समस्या २०६८ सालदेखि भएको थियो । त्यो बेलादेखि नै शाहीलाई विद्यार्थीको अगाडि बोल्न निकै गा¥ह«ो महसुस हुन्थ्यो । काम गरेर कमाएको पैसाले परिवार पाल्न नसक्ने हो कि भन्ने उनमा ठूलो चिन्ता भयो । पछिल्लो समय उनले तीन महिनादेखि आत्महत्या गर्ने सोच बनाए । चिन्तामा छट्पटाइरहेको बेला एक दिन बेलायतबाट प्रशारण हुने बीबीसी नेपाली सेवामा वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ प्रा.डा. सरोज वझाको अन्तर्वार्ता सुनेका थिए । त्यसमा परामर्श र औषधिको सेवनबाट डिप्रेसन समस्या पूर्ण रुपमा समाधान भएका धेरै उदाहरण प्रस्तुत भएका थिए । डिप्रेसनका कारण सानैमा आत्महत्या गर्नसमेत अघि सरेका एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जगन्नाथ लामिछानेले विशेष परामर्श र औषधि सेवनका कारण समस्याबाट मुक्ति पाएको कथा पनि सुन्ने मौका पाए । त्यसपछि शाही प्रा.डा. वझासँग परामर्श र औषधोपचार सेवा लिने निधो गरी केही समयअघि काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित त्रि.वि.शिक्षण अस्पताल आइपुगे । यतिखेर उनी डा. वझाको काउन्सिलिङ र औषधोपचारमा छन् । उनलाई मानसिक समस्या समाधानका लागि औषधि चलाइएको छ । उनले बिस्तारै आफूलाई सहजता भएको महसुस गर्दैछन् । रोग पूर्ण रुपमा निको हुन करिब ४ देखि ६ महिना लाग्ने छ ।
विश्वमा मानिसलाई अशक्त गराउने रोगहरुमध्ये एचआईभी एड्सपछि दोस्रो कारणमा डिप्रेसन देखिएको छ । मनका धेरै रोगमध्ये डिप्रेसन धेरैमा देखिने समस्या हो । यसरी नै डिप्रेसनको बृद्धि भएमा विश्वमा डिप्रेसनले विकराल रुप लिने छ । यसलाई दृष्टिगत गरी विश्व स्वास्थ्य संघले आफ्ना १ सय ७७ राष्ट्रहरुमा डिप्रेसनबारे बर्षभरि खुलेर कुरा गर्न आव्हान गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार, विश्वमा ३ करोडमा डिप्रेसन छ । यो विश्वको जनसंख्याको ४ प्रतिशत हो । मन कमजोर हुने रोग नै डिप्रेसन हो । मन स्वस्थ्य भएमा मन ठीक हुन्छ । सोच्ने सक्ने शक्ति ठीक भएमा व्यवहार ठीक हुन्छ ।
मन र सोच बिग्रिने कारण
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार, डिप्रेसन र एन्जाइटी हरेक पाँच जनामध्ये एकजनामा देखिने गर्छ । अमेरिकामा हरेक ४ जना महिलामध्ये एकजना र हरेक ८ जना पुरुषमध्ये एक जनालाई डिप्रेसन हुने गरेको पाइएको छ । मनको बिरामीलाई मुड डिसअर्डर र विचारको बिरामीलाई थिंकिङ डिसअर्डर भनिन्छ । मनले भाव व्यक्त गर्छ । यो देखिदैन । मन कमजोर भएमा डिप्रेसन र मन डराएमा एन्जाइटी हुन्छ । कडाखालको मनोरोगलाई म्यानिया भनिन्छ । यो थोरै मानिसलाई मात्र हुन्छ ।
मन र सोचाइ बिग्रिने कारक तत्व
मन र विचार मस्तिष्कमा उत्पन्न हुने भएकाले मस्तिष्क स्वस्थ्य रहन जरुरी पर्छ । अन्यथा मन र विचारमा समस्या आउनसक्छ । त्यसैले मस्ष्तिकलाई आघात पार्ने कुनै पनि क्रियाकलाप गर्न हुँदैन । टाउकोमा लाग्ने चोट, धेरै ज्वरोका कारण इन्फेक्सन, पोषणको अभाव, टाउकोमा पिट्ने आदिले मस्तिष्कमा आघात पर्नसक्छ । यसरी विभिन्न कारणबाट मस्तिष्कको विकासमा असर परेमा मन र विचारका बिरामीहरु उत्पन्न हुने संभावना धेरै हुन्छ ।
सन् २०१५ मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले देश गरिब हुने कारणमध्ये मानसिक स्वास्थ्य पनि भएकाले यसलाई प्राथमिकता दिएमा समग्र मुलुकको विकास हुनेमा जोड दिएको छ । नेपालमा बि.सं.२०५३ सालमा राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति बन्यो । तर यसको कार्यान्वयन भएन । मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएकाहरुलाई बौलाहा र पागलको संज्ञा दिइयो । विश्व स्वास्थ्य दिवसको अवसरमा वर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाले परिमार्जित नयाँ मानसिक स्वास्थ्य नीतिको मस्यौदा तयार भइसकेको र मन्त्री परिषद्बाट चाँडै स्वीकृति गराउने जानकारी दिनुभएको छ । यसरी राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति २०७३ स्वीकृति भई चाँडै लागू हुने क्रममा छ । यसरी बनाइएको मानसिक स्वास्थ्य नीति सक्रिय रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्राथमिकतामा मानसिक स्वास्थ्य पनि परेको छ । तर यो पर्याप्त छैन । यसलाई अझ व्यापक र व्यस्थित बनाउन जरुरी छ । मानसिक स्वास्थ्य सेवा जिल्ला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो । यसका लागि डाक्टरहरुलाई तालिम दिन जरुरी हुन्छ ।
विश्वमा क्यान्सर, उच्चरक्तचाप, दम, मधुमेह, इन्जुरी र मानसिक समस्या प्रमुख रुपमा देखिएका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले हरेक ५ जनामध्ये एक जनामा मानसिक समस्या देखिने उल्लेख गरेको छ । अहिले विश्वमा करिब २ अर्ब जनसंख्यालाई मानसिक समस्या हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । डिप्रेसनबाट मात्र ३ करोड जनसंख्या पीडित छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालमा करिब २० प्रतिशतमा मानसिक समस्या हुनसक्ने उल्लेख गरेको छ । यसैलाई आधार मान्दा नेपालमा करिब ६० लाख जनसंख्या मानसिक समस्याबाट ग्रसित छन् ।